गरिबीको भुमरीमा अवसरको खाँचो - Ratopati
पुस–माघको तुसारो र शीतमा कठ्याङ्ग्रिँदै नाकमा सिँगान बोकेर पुरानो, मैलो बख्खु लगाएको बालक गाईवस्तुको स्याहार गर्दै गर्दा आगोमा फालहाल्न चाहन्छ तर बाध्यता छ, उसको दैनिकी त्यही हो ।
दुई हातलाई काखीमुनि च्यापेर जाडो छेक्न चाहन्छ, आफ्नै मुखबाट निस्केको तातो बाफले ठिहिर्याएको हात सेक्न बानी परेको हुन्छ, उसलाई । राष्ट्रियतासँग हक र अधिकारका कुरा जोड्ने उच्च बौद्धिकता त्यहाँ असान्दर्भिक बन्छ । ढिँढो, गुन्द्रुकको स्वाद र मिठास त्यहाँ अवस्य छ । रात्रि प्रहरमा गुटमुटिएर पेटको घुरघुरलाई एकछिन बिर्सन पुग्दा सायद तिनले चिल्ला गाडी या हवाइजहाजमा चढेको स्वप्ना होइन बरु खाली पेट भरिने गरी खाएको स्वप्नालाई शुभ भन्नैपर्छ । धनाढ्य मालिकको कार पुछेर चिल्लो पार्ने बालकको हृदयले त्यसमा सवार भई यात्राको आनन्द लिनलाई अकल्पनीय ठान्नु पनि नौलो होइन रहेछ । चाहे जाडो याममा विकसित सहरको सुन्दर होटलमा भालेको डाकसँगै भाँडा माझिरहेको बालक होस् या ड्राइभर अनि गाडी मालिकको तुच्छ वचन र व्यवहारलाई चुपचाप सहने बालक; आखिर त्यहाँ अभावको हतौडा प्रहार सहनको सामथ्र्य राख्नै परेको छ । तराईको दूरदराजमा मालिकको भैँसीलाई घाँस काट्न गएकी आमासँग शरीरमा कम्मल बेरेर दुई हातले जाडो छेक्न कोसिस गरिरहेको बच्चाले तिनका अभिभावकलाई मोटरबाइक किनिदिन आग्रह गर्दैन । दौँतरी मालिकको नातिले भैँसीको तातो दूध खान अटेर गर्दा आपूmले पाइएला भन्ने आशा गर्नु नपर्ने कुरा उसले बुझ्छ । किनभने त्यो घरमा पालिएका कुकुर र बिरालो नै ऊभन्दा प्रिय हुन्छन् ।
प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक धरोहरले सम्पन्न भएर आज पनि हाम्रो मुलुकमा ‘हुँदा खानेका’ कारुणिक पीडाले कलेजी दुःखाइरहेकै छ । हरेक श्रमजीवी नेपालीलाई पाखुरी बजारेर प्राप्त लक्ष्मीकृपाको उत्सव मनाउने मूल अपेक्षाले कुत्कुत्याइरहन्छ । पुख्र्यौली पौरख पस्केर माणको जोहो गर्दा गर्दै रित्तिएको थोत्रो झोली थापेर छिमेकमा भिक्षा माग्नु परेको विडम्बना देशमा अद्यापि छ । बदलामा साम्प्रदायिक दुर्भावनाका किटाणु उपहार स्वरुप पाइरहिएको छ । श्रमजीवी वर्गको वकालत गर्ने सुकिलो कपडामा सजिएका नेतृत्व तिनैको पसिनामा लुछाचुँडी गर्न हिच्किचाएको लाग्दैन । अभावले थिचिएपछि रोगसँग मुकाबिला गर्दै कर्मलाई सरापेर यमढोका ढक्ढक्याउनेका चित्कार झनै दयनीय छन् । अस्पताल वा छाप्रोको मृत्युशय्यामा साहुको ऋण सम्झेर वेदनामा डुबेको नेपाली बन्धुको पीडा कति हृदयस्पर्शी छ । लाजमर्दो कुरा राहतमा समेत भ्रष्टाचार हुन्छ, श्रम शोषण हुन्छ । बालश्रम शोषणका घटना पुराना बन्नै सक्दैनन् । बाध्यताले, अवसरले, व्यवस्थाले; प्राचीन युगको संस्कार र परम्पराबाट उम्कँदै गरेका राउटेदेखि बडेमानका घरमा पहरेदार राखेर चिल्ला गाडीमा सवार गर्ने व्यक्तिका बीचको असमानता छँदै छ । राजधानीमा या अन्य ठूला सहरमा; बोत्तल, प्लास्टिक, काटुन टिप्ने अर्थात् कमसेकम प्रकृतिलाई सफाइ गरिरहेका ती नेपालीलाई महलबासीले मात्र होइन चिसो रातमा सँगै सुत्ने गल्लीका भुस्याहा ककुरले समेत लखेटिरहेका हुन्छन् । आज पनि ओडारमा बस्ने नेपाली कति होलान् ? तथ्याङ्क यकिन कहाँ छ । गाडी गुड्ने स्थानसम्मका समस्यालाई अलिअलि समेट्न थालिए पनि विकासको गन्ध थाहा नपाएका आफ्नै खाले संस्कारमा बाँच्ने नेपालीका कति पीडा पर्दा पछाडि छन् । विभिन्न सञ्चार माध्यमले खान्तलास गरेर यस्ता अनेकौँ पीडालाई तथ्यसहित पर्दाफास गर्नु अवश्य पनि गर्वको विषय हो ।
चेतना, शिक्षा, अवसरबाट टाढिएका दुर्गम हिमालबासी मात्र नभएर श्रमको उचित मूल्य नपाएका बोल्न नसक्ने र समस्या ओकल्ने कुरा नबुझेका सोझा नेपालबासीको छाक टार्ने टिठलाग्दो दैनिकीले मुहार फेर्न सकेको लाग्दैन । सशस्त्र द्वन्द्वले, प्राकृतिक प्रकोपले या अन्य कारणले अर्थात् चाहेर पनि उद्यम गर्न नसकेका कैयौँ देशवासी गरिबीको रेखामुनि छन् । गरिबी र असचेतनाका सिकार बनेर आज पनि छाउपडी प्रथा, देउकी प्रथा, कमैया प्रथा अनि झाराजस्ता विविध प्रथाले मानव अधिकारमा ग्रहण लगाइरहेको छ । यस्ता अनेक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या अन्य कारणले कैयौँ नेपालीहरू गरिबीको चपेटामा थिचिएका छन् ।
नेपालको संविधान भाग ३ को “मौलिक हक र कर्तव्य” अन्तर्गत समानताको हकभित्र स्पष्टीकरणमा “आर्थिक रुपले विपन्न भन्ने पदावलीको अर्थ सङ्घीय कानुनमा तोकिएको आयभन्दा कम आय भएको व्यक्ति सम्झनुपर्छ” भनी उल्लेख गरिएको छ । जनता जति आफ्ना माग तेस्र्याइरहेको छ र सरकार जुन विषयमा भुलिरहेको छ, त्यो पनि गरिबीको उच्च पराकाष्ठासँग थुरिएको छ । भीरपाखा कर्मशील लाग्छन् तर स्वदेशको पौरख समुद्रपारी बलात्कृत भइरहेको छ । सत्तादौडको घोडेजात्रा बाहेक अन्य खेल रुचिकर लाग्न छोडिसक्यो । अनमोल प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक दौलतले निर्वस्त्र प्रदूषण स्थल बन्नुपरेको तीतो सत्य आजकै हो । भोकाएकी आमाको स्तनसँग झुक्ति खेल्ने नाबालकलाई कुपोषणको स्वाद प्राप्त भइरहेकै छ, आज पनि । गाँस, बास र कपासको आधार नभएकाहरूले चाहेर पनि उच्च शिरले राष्ट्रिय गान गाउनलाई छातमिा हात राख्न सक्दैन । मानवता, दया, करुणा सबै पैसामा बिक्न थालेका छन् । समाजले तिनै निरीह दीनहीनमाथि अनावश्यक दोष थोपर्छ, देख्नेले ताली बजाउँछन् । जुन गरिबले राष्ट्रिय पोषाक लगाएर प्राण धान्ने अन्न उब्जाउँछ, उसलाई पाखे उपनाम मिल्छ । अत्याधुनिक युगको सुगन्धले भरिएको सुगम सहरका गल्लीहरूमा महँगीको बज्र प्रहार हुन्छ । छिडीको अँध्यारो कोठालाई मासिक दाम तिर्ने श्रमजीवीको रडाको कति टिठलाग्दो लाग्छ । साँझमा भुटुनको जोहो गर्न र चाडपर्वमा भुटन खुवाउने सङ्घर्षमा हजारौँको केस पाकिरहेको छ । सुकिलो कपडामा चट्ट आइरन लगाएर बैंकमा, निजी विद्यालयमा, पसलमा या अन्य सङ्घ संस्थामा नै काम गर्ने होऊन्, यहाँ ती मनोवैज्ञानिक दर्दको बेग्लै र आ–आफ्नै पीडादायी संसार छ ।
आ.व.२०७२÷०७३ को आँकलनअनुसार एउटा नेपाली शिशुले नेपाली भूमिमा जन्मदा उसको टाउकोमा रु.२१,४१५ ।– ऋण बोकेको हुन्छ । गरिबीको वेदनाले छटपटिँदै पसिनालाई पैसामा साट्ने ठूलो स्वप्ना बुनेर विगत २०६३ देखि २०७२ फागुन मसान्तसम्ममा ३४ लाख ८१ हजार ५ सय ३ जना नेपाली युवायुवती विदेशिएको तथ्याङ्क छ । जति नियम बनून् तर मेनपावरमा घरखेत धितो राखेर ल्याइएको लाखौँको बिटो बुझाए पनि तोकिएको रकम मात्र तिरेको बिल पेस गरी विदेशिने श्रमप्रेमीका पीडा उस्तै छन् । कति नेपालीले परदेशकै भूमिमा आफ्नो प्राण छोड्नु परेको, कतिका हत्या गरिएका हृदयविदारक घटना सञ्चार माध्यममा आइरहेकै छन् । मानवीय संवेदनाका प्रहार त हृदयविदारक छन् नै त्यसमा अभैm विदेशिएका परिवारले टहरो या छाप्रोमा सुखको चाड–पर्व मनाउन चाहँदाको रुन्चे हाँसो कति दयनीय हुँदो हो ।
देशसँग भने आय आधार कृषि उत्पादन गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्नदेखि आधुनिकीकरण र बजारीकरणको टड्कारो आवश्यकतासँग बाँझो खेतको बिलौना छ । औद्योगिकरणको विकासमा भौगोलिक, सांस्कृतिक विकास गर्दै विदेशी आकर्षणको पाटोले तङ्ग्रिन पाएको छैन । बढ्दो कर्जा सङ्कट, स्थानीय अवरोध, विद्युत योजना निर्माण र खरिद सम्झौतामा देखिएका चुनौती गरिबी निवारणका तगारा छँदै छन् । विप्रेषण आयलाई पुँजीमा रुपान्तरण गरी उत्पादनमूलक बन्न नसक्दा, गैरकानुनी वित्तीय कारोबार रोक्न चुनौती भइरहँदा अर्थविद्हरूको मन कुँडिएको हुन्छ । गरिबीलाई मापन गरेर पुँजी व्यवस्थापन गर्ने तथा वित्तीय स्थायित्व तथा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने कुराका अप्ठ्यारा त्यहाँ जोडिँदा रहेछन् ।
स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाद्वारा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा भइरहेका सुधार र सुविधाले केही हदसम्म वेदनामा मलमपट्टी भइरहेको कार्य प्रशंसनीय अवश्य छ । साथमा डा. गोविन्द के.सी.को माग र सङ्घर्षको कार्य पनि कम सह्राहनीय नरहला नै । बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम विपन्नका वेदनाले गरेको कार्य आदरयोग्य अवश्य छ । यसर्थ अब, सबै दोष सरकारको थाप्लोमा थोपर्ने विचारभन्दा आपैmँले पनि होस्टेमा हैँसे गरेर ‘आफ्नो गाउँ आपैmँ बनाऔँ’ भन्ने मन्त्रसँग तमाम नेपालीहरूले एकाकार हुन जान्नुपर्छ । गरिबी निवारणका खातिर सरकारले गरेका, थालेका र गरिरहेका कर्णाली रोजगार कार्यक्रम, गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम, ग्रामीण सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, स्थानीय अग्रसरतालाई नयाँ ज्ञान र सीपसँग जोड्ने कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नेपाल खाद्य सङ्कट सम्बोधनजस्ता कार्यक्रममा सारा नेपालीले काँध जोड्नुपर्छ । जीवनस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रमले पश्चिमी पहाडका आठवटा जिल्लाका १३५ गाविसमा सामुदायिक लगानीबाट स्थानीय संलग्नता गराएर गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याइरहेको तथ्य छ । राष्ट्रिय गरिबी निवारण नीतिको मस्यौदा निर्माण, रोजगार तथा आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन, गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम आखिर सबै सह्राहनीय पक्ष हुन् । आज लैङ्गिक समता अभिवृद्धि दर बढ्नु, विद्यार्थी भर्नादर वृद्धिबाट साक्षरता बढ्नु तथा बाल, शिशु र मातृ मृत्युदर घट्नु गौरवका विषय हुन् । सन् १९९० मा प्रतिलाख ८५० को दरमा भएको मातृ मृत्युदरलाई घटाएर २०१३ सम्म आइपुग्दा २५८ प्रतिलाख बनाउन सफल हुनुका पछाडि सरकारले चालेको निःशुल्क प्रसूति सेवा, यातायात खर्च प्रदान, दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य कर्मीलाई दिइएका उत्प्रेरणादेखि गर्भ पतनका कानुनी मान्यता जोडिएका हुन्छन् । विभिन्न खाले खोप, पोलियो, हात्ती पाइले रोग उपचार सेवादेखि गरिबी निवारण कोषका कार्यले राम्रो उपलब्धि हासिल गरेको छ । आयमूलक, सामुदायिक पूर्वाधार विकास र नवीनतम कार्यक्रम गरी कुल २ हजार ४८ परियोजना कार्यान्वयन गरिएको तथ्याङ्क छ । युवा तथा साना व्यावसायी स्वरोजगार कोष, दिगो विकासका लक्ष्य, व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रहरूले गरिबी निवारणमा लक्षित भएर गरेका उद्यमशील कार्यक्रमलाई व्यवहारमा उतार्दै जानु आवश्यक छ ।
मानवताको विषयभित्र बन्धुत्वको भाव जागृत बन्दो रहेछ । आज सरकारी मात्रै नभएर अन्य सङ्घ संस्थाले समेत मानवताका लागि नेपालमा अतुलनीय भूमिका खेलिरहेका छन् । विश्वका अन्य देशका विपन्न स्थानमा मात्र नभई नेपालको धादिङ जिल्लाको तसर्पुमा रहेको ‘द प्रेम रावत फाउन्डेसन’ ले दैनिक बिहानीको छाकमा करिब ५०० स्कुले बच्चा र १०० ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निःशुल्क स्वच्छ भोजन प्रदान गर्ने गरेकाले त्यहाँका भोकै विद्यालय जाने गरिब बाल बच्चाले विद्यालय जाने अवसर पाइरहेका छन् । यो र यस्ता विशुद्ध मानवीय सेवामा समर्पित कार्यक्रमबाट गरिबीको सीमा मेटाउन सकिनेमा शङ्का नरहला । रेडक्रस, सेल्फ हेल्प नेपालजस्ता कति ज्ञात अज्ञात मनकारी व्यक्ति र संस्थाका मानवीय व्यवहारले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तवरबाट विपन्नका वेदनाले आँशु ओभाउने अवसर पाउँदा रहेछन् ।